morgan tsvangarai on News24
ARTICLES RELATING TO MORGAN TSVANGARAI
PICS: The young opposition leader plotting Zimbabwe poll upset
Top Africa stories: Zanu-PF, Tsvangirai, Chiwenga
Expelled ex-Zanu-PF heavyweights, Didymus Mutasa and Rugare Gumbo say they're 'ready to rejoin party', and Morgan Tsvangirai has appointed one of his three deputies to take charge of the party while he undergoes cancer treatment.
Top Africa stories: Grace Mugabe, MDC, Madagascar
The Zimbabwean government has reportedly withdrawn ex-first lady Grace Mugabe's state security detail and the MDC says the party remains firmly behind Morgan Tsvangirai.
Zimbabwe's Electoral Commission chairperson Justice Rita Makarau has reportedly resigned just a couple of months before the crunch polls in 2018.
Top Africa stories: I Coast, Kenya, Zim
Gun fire erupts in Ivory Coast after soldiers who mutinied in January apologised to President Alassane Ouattara, and Mujuru together with Tsvangirai are in talks to lead a united opposition alliance to try to unseat Mugabe.
Zimbabwe’s main opposition leader Morgan Tsvangirai has been taken ill and is in South Africa for medical treatment, officials say.
Zimbabwe's ruling Zanu-PF party has warned opposition political parties to desist from violent activities, saying that they should conduct themselves in a manner that is "acceptable to the citizens" ahead of the country's crunch elections later this year, a report says.
As the body of Zimbabwe's main opposition leader awaits repatriation home for burial, his party already faces nasty power struggles to replace a man praised by both allies and rivals for his tenacious fight for democracy.
Zimbabwe's main opposition leader has dropped the biggest hint yet he could step down from his party, setting the stage for an election scenario not witnessed since 2002.
Zimbabwe's main opposition, the Movement for Democratic Change party youths have called on long-time leader Morgan Tsvangirai to step aside in order to allow new leaders to take the party forward, says a report.
Exiled Zimbabwean cleric Evan Mawarire has urged his followers to join him in protests ahead of president Robert Mugabe's arrival at the United Nation's general assembly this weekend.
Chaos at SADC summit venue as police clash with protesters
Armed police and over 200 members of Zimbabwe's main opposition party MDC-T have clashed in the Harare central business district, in front of the venue where a SADC summit is underway.